मेषः– काममा देखिएका समस्या कम हुनेछन् । शारीरिक एवं मानसिक स्फूर्ति बढ्नेछ । पढाई लेखाईमा थोरै ध्यान जानेछ । व्यापार व्यवसायमा सामान्य सुधार आउनेछ । अनावस्यक खर्चमा कमि आउनेछ । आफन्तबाट सहयोग सहानुभुति मिल्नेछ । उत्तम भोजन र आसन प्रप्तिको योग देखिन्छ ।
वृषः– अस्थिरता बढ्नेछ । कार्य लनगशिलता घट्दा उपलब्धि घट्नेछ । पिताको स्वास्थ्यमा समस्या आउन सक्छ । कसैबाट माया ममतामा पाईने छैन । फजुल खर्चमा वृद्धि हुनेछ । दुर्जनहरुले पिछा गर्ने छन् । व्यापारमा गरेको लगानी डुब्न सक्छ । परिश्रमको मुल्य लिन ठुलै कसरत गर्नु पर्नेछ । आस्था र विश्वासमा चोट लाग्न सक्छ ।
मिथुनः– भद्र भलादमीको सहयोग मिल्नेछ । आकस्मिक आम्दानीको योग देखिन्छ । व्यापार व्यवसायबाट आय आर्जन राम्रो हुनेछ । घर परिवारमा सुख,शान्ति मिल्नेछ । उधारो कारोवार नगर्नु होला । प्रयत्न गरेमा बक्यौता रकम उठ्नेछ । पुराना मित्रहरु भेटिने छन् । पढाई लेखाईमा प्रगति हुनेछ ।
कर्कटः– सकरात्म सोचको विकाश हुनेछ । असहज परिस्थितिको सामना हुनेछ । रोकिएका कामले गति लिनेछ । कर्म प्रप्तिको योग देखिन्छ । नोकरी तथा राजनीतिमा भूमिकाको खोजी हुनेछ । गुमेको विश्वास पलाउनेछ । कार्य क्षमता बढ्नेछ । सहयोगी मन भेटिने छन् । सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्नु पर्नेछ ।
यो पनि पढ्नुहोस चार बुँदे सहमति पछि टीकापुर घटनाका अभियुक्तको अनशन तोडियो
वृश्चिकः– आफ्नो काममा आफै लाग्नु होला । संघर्षबाट मात्र लक्ष्य भेटाईनेछ । शत्रुहरुले सहज रुपमा काम हुन दिने छैनन । प्रतिश्पर्धाबाट पछि नहट्नु होला अन्तिम परिणाम सुखद निस्कनेछ । व्यापार व्यवसायमा क्रमिक सुधार आउनेछ । ऋणमा काम नगर्नु होला । मुद्धा मामिलामा जीत हुनेछ ।
कुम्भः– साहास,धैर्यता र पराक्रम बढ्नेछ । प्रयत्न गरेमा नयाँ काम हात पार्न सकिनेछ । उपकारका काममा धन खर्च हुनेछ । पढाई लेखाईमा प्रगति हुनेछ । व्यापार व्यवसायबाट आम्दानी बढ्नेछ । घर परिवार,साथी भाइबाट सहयोग मिल्नेछ । नोकरी तथा राजनीतिमा भूमिकाको खोजी हुनेछ । संचित धन बढ्नेछ ।
मिनः– अरुको भरमा मात्र काम नगर्नु होला । आर्थिक कारोवारमा विशेष चनाखो रहनुहोला । वोलीको प्रभाव थोरै पर्नेछ । प्रयास र प्रयत्नहरु सफल हुनेछन् । व्यापार व्यवसायबाट मुनाफा कम हुनेछ । पढाई लेखाईमा सामान्य प्रगति हुनेछ । नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्दा एक पटक सोचेर मात्र गर्नु होला । नोकरीबाट सन्तुष्टि मिल्ने छैन ।
यो पनि पढ्नुहोस आञ्चलिक विम्बहरूले सजिएको कवितासङ्ग्रह ‘उज्यालो खोजिरहेको घाम’ (पुस्तकसमीक्षा)
३०,असार.२०७६,सोमबार ०६:३० मा प्रकाशित
← होटेलमा भेटिन्छन् मन्त्रालयका कर्मचारी
प्रधानमन्त्रीले जनतालाई ढाँट्न मिल्छ ? किन झुके प्रधानमन्त्री ? →
Email: [email protected] /[email protected]com